सबैलाई भाग पुग्नेगरी आईपियो खुल्यो, कति दिने आवेदन ? — Sanchar Kendra
काठमाडौँ । मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनीले सर्बसाधारणका लागि आजबाट सार्वजनिक निश्कासन (आईपीओ) बिक्री खुला गरेको छ। कम्पनीले सर्बसाधारणलाई प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ९० करोड बराबरको ९० लाख कित्ता सेयर निश्कासन गरेको हो ।
ड्यूटीमा भेटिदैनन् सिभिल अस्पतालका चिकित्सक, तलब भत्ता सरकारी, काम भने निजीतिर
देउवालाई विप्लवको प्रश्न- नेकपासँग लड्ने की सिमानामा हस्तक्षेप गर्ने एसएसबीसँग लड्ने ?
अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघको सातौं राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु, विप्लवले गरे उद्घाटन (फोटो फिचर)